China China Luxury ukukhanyisa mveliso ngekristale chandelier mihla ekhaya zokuhombisa OEM kunye Factory | SHUNDA
Ifowuni / Whatsapp: 008618753481285
Izibane / Izibane
2021 New Crystal Itheyibhile Lamp Ukufudumeza Romantic Ekhaya ...
100% Zonke Copper Chandelier Jade Decorative Living Ro ...
Wall Onyuswe Shelf Moon kunye isipili Bac yomthi metal ...
Ukuphuza i-resin ye-goldfish okanye i-copper copper metal ...
I-crab encinci engaqhelekanga ithanga lesilwanyana sasebusuku sokukhanya ...
Uhlobo olutsha Iibhola ze-rattan ezinikwe amandla elanga zihombisa ubusuku ...
Ekhokelwa kwenyanga Inyanga isigaba yeglasi isipili eludongeni ekhaya hang ...
Best Ixabiso yangaphandle Manzi Luxury Onyuswe Creati ...
China Luxury ukukhanyisa mveliso mihla crystal chandel ...
Wall Onyuswe amachaphaza iinkuni Ubude bethuba Wooden ezishelifini ...
China Luxury ukukhanyisa mveliso yanamhlanje yikristale chandelier yokuhombisa ekhaya
* Wamkelekile ulungiselele nasiphi na isibane / ukukhanya *
Imisebenzi yezandla eyenziwe ngesandla
Kwala maxesha, aphakathi, ilizwe, indlu yasefama, eyomzi mveliso nezinye iindlela zokuhombisa. Kwangelo xesha kulula ukucoca, ukumelana nokuguga, kwaye kuya kukunceda iminyaka emininzi.
Ukufakwa kunye nenkonzo yokubonisa:I-crystal yale chandelier kufuneka ifakwe ngumthengi. Kuthatha kuphela imizuzu embalwa ukukhanyisa igumbi lakho!
Olu lungelelwaniso lokukhanya kwemizi-mveliso lufanelekile ngeendlela ezahlukeneyo zokuhombisa ekhaya, ezinje ngezibane zendawo yokuhlala, izibane zelingi lokulala, izibane zesilingi ekhitshini, izibane zophahla lwefama, igumbi lokutyela, izibane zesilingi, njalo njalo.
UMHLAHLO WASEKHAYA WAKHAYA uzibophelele ekunikezeleni abathengi bethu abaxabisekileyo ngemigangatho ekumgangatho ophezulu, efikelelekayo kunye nokukhanya okukhanyisa amakhaya abo. Sineendlela ezahlukeneyo zokukhanyisa, siyakholelwa ukuba uyakukhetha iimveliso ezisesitayeleni sakho sokuhombisa kwi-SHUNDA LIGHTING. Umsebenzi wethu kukubonelela ngamava okukhanyisa aphezulu kubo bonke abathengi.
Izinto eziphathekayo I-Crystal, isinyithi
Ukupakisha Ukungathathi hlangothi okanye ukupakisha ngokwezifiso
Ixesha lokuzisa Malunga neentsuku ezisi-7 zokusebenza emva kokufumana idiphozithi
Ukuthunyelwa NguMoya, nguLwandle, yi-Express (DHL, TNT, UPS, EMS, Fed Ex)
Indawo yokusebenzela kunye neMveliso
1. I-OEM kunye ne-ODM, Nasiphi na isixhobo sokukhanyisa singenziwa ngokwezifiso, umbala, ubungakanani, njl.
2.Ukubuza kwakho kufikelele kwiimveliso zethu okanye kumaxabiso kuya kuphendulwa ngeyure e-1
3. Owona mgangatho uphezulu, ixabiso lokukhuphisana kunye nokuHanjiswa kwexesha.
Umzi mveliso weShunda yoHlobiso lwaseKhaya ngumboneleli wobuchule bokukhanyisa obonelela ngemveliso, uyilo, ukuthengisa kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa kubathengi behlabathi. Inkampani yethu ijolise kwimveliso kunye nokuyila zonke iintlobo zeemveliso zokukhanyisa ezifana nesibane sependant, isibane sodonga, isibane sophahla, isibane setafile, isibane somgangatho njl njl. Ezisetyenziswa kakhulu kwizakhiwo zeofisi, iivenkile ezinkulu, iivenkile ezinkulu, izikolo, iprojekthi yeehotele, sikwanikezela Iinkonzo zeshishini ze-OEM kunye ne-ODM.
Umgangatho ophezulu, iimveliso zexabiso lokukhuphisana kunye nenkonzo efanelekileyo kukulandela kwethu okungapheliyo. Fikelela kumava kwimveliso yokukhanyisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe ukholelwa ukuba inokukunika amava okusebenzisana okuhle. Ngokukhanya okuqaqambileyo, ukusebenza kwenoveli, iindlela ezahlukeneyo kunye nenkonzo enengqiqo, iimveliso zethu ziphumelele ubungangamsha kunye nokuthembela kubathengi bethu, Jonga umyalezo wakho kwaye wamkelekile kumzi mveliso wethu.
Egqithileyo I-China Crystal Chandelier UkuKhanya kokuKhanya okuKhazimlayo kweCrystal Hanging Lampara Luminaires Drop Lustres kwindawo yokutyela egumbini lokuhlala
Okulandelayo: Igumbi lokuhlala laseNordic ikhandlela yendalo yokulala kwigumbi lokutyela umlingo weembotyi zeglasi eneenkwenkwezi zokukhanya ezikhanyayo
UkuKhanya okuKhanyisiweyo kweNdonga
100% Zonke Copper Chandelier Jade Decorative Livi ...
Uhlobo olutsha Iibhola ze-rattan ezinikwe amandla elanga zihombisa ...
Stylish itafile isibane mveliso mihla wholes ngqo ...
Best Ixabiso yangaphandle Luxury okungangenwa Onyuswe C ...
Product New2020 3D ilenga Lamp Moon ...
Stylish mihla yeglasi yeglasi isibane setafile isibane ...
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso zethu, nceda ushiye imeyile / whatsapp yethu kuthi kwaye siya kuba kwebala kwisithuba seeyure ezili-12.
Wall Onyuswe Shelf Moon nesipili Woode ...
Imveliso eTshintshayo eNtsha ye-3D ejingayo yeNyanga ...
Imveliso entsha Turbine Blower Wine Pot i ...
isipili seglasi yokwenyani, izibane kunye neshelfu ...
Iimveliso zokuhombisa ekhaya zeShunda
Lwedilesi: Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong kwiPhondo, China